चैतसम्म सवै विद्यालयले शिक्षक पाउँछन: जिशिअ मैनाली | Suchana Patra चैतसम्म सवै विद्यालयले शिक्षक पाउँछन: जिशिअ मैनाली | Suchana Patra
| पुष १२, २०७३ | १५५३ पटक हेरिएको
लामो सयमदेखि जिल्लामा शिक्षक दरवन्दी मिलानको काम अघि बढन सकेको छैन । शिक्षकहरु बजार केन्द्रीत भएका छन भने गाउँका विद्यालयमा जानै मन गर्दैन । त्यो कारण गाउँका विद्यालयको शिक्षण सिकाइ समेत कमजोर छ । जिल्लाका ४ सय २१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । २५ वटा प्रावि विद्यालयमा एकजना पनि दरबन्दीको शिक्षक छैन ।
त्यसैगरे ६ कक्षादेखि ८ कक्षा चलेका १५ र माध्यमिक तह चलेका १२ वटा विद्यालयमा दरवन्दीका शिक्षकहरु छैनन् । जिल्ला शिक्षाा कार्यालयले पटक पटक शिक्षक दरबन्दी मिलानको कुरा उठाउने गरेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । तर यो पटक भने कामले सफलता प्राप्त गर्ने शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा दरबन्दी मिलानको काम अव कसरी अघि जान्छ र जिल्लाको शैक्षिक विकासको चुनौतीको बारेमा अमरराज आचार्यले जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशप्रसाद मैनालीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
जिल्लाको शिक्षक दरवन्दी मिलानको अवस्था के छ ?
जिल्लामा दरवन्दी मिलानको लागि अगाडि वढेका छौ । लामो समय देखि जिल्लामा दरवन्दी मिलान हुन सकेको थिएन । म जिल्लामा आए देखि नै दरवन्दी मिलान कार्यलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि वढेको छु । जिल्लामा हाल ४ सय २१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । जसमा हाल १ हजार ७ सय ६५ जना शिक्षकहरु दरवन्दीमा रहनु भएको छ । त्यसै गरेर ६ सय ९७ जना राहात अनुदानका शिक्षक कार्यरत छन् । जिल्लामा आधार भुत तह प्राथमिक तहमा १ हजार २ सय ४० जना दरवन्दी छ भने ४ सय ५५ जना राहात अनुदानका शिक्षक कार्यरत छन् । निम्न माध्यमिक विद्यालयमा २ सय ७८ जना दरवन्दी र १ सय ३४ जना राहात अनुदानका शिक्षकहरु छन् । माध्यमिक विद्यालयमा २ सय २२ जना दरवन्दी ५६ जनाको राहात अनुदानका शिक्षक छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा २५ जना दरवन्दी र ५२ जना राहात अनुदानमा कार्यरत छन् । यो जिल्लामा शिक्षकको अवस्था भयो भने जिल्लाका २५ वटा प्रावि विद्यालयमा एकजना पनि दरबन्दीको शिक्षक छैन । त्यसैगरे ६ कक्षादेखि चलेका चलेका विद्यालयमा १५ र माध्यमिक तहको १२ वटा विद्यालयमा दरवन्दीका शिक्षकहरु छैनन् । यस्तो अवस्थामा अव हामीले काम गर्न सुरु गरेका छौ । शिक्षको अभावमा विद्यालयहरु सञ्चालमा समेत समस्या भएको छ ।
जिल्लाका ५२ विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक छैनन । अव कसरी काम हुन्छ ?
जिल्लाका विद्यालयमा दरवन्दी मिलानकालागि एउटा मापदण्ड वनाएर अगाडि वढने छौ । माप दण्ड निर्धारणकालागि शिक्षकका पेशागत संघ संगठनहरु संग छलफल गरेर अगाडि वढने छौ । जस्कालागि शिक्षकका पेशागत संघ संगठनका प्रमुखहरुसंग छलफल समेत भइरहेको छ । दरवन्दी मिलान नगरी नहुने भएकाले पनि यसमा सवैको सकारात्मक सहयोग छ । सरकारले समेत सवै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई चैत्र महिना सम्म दरवन्दी मिलान गरी सक्ने भनेर निर्देशन गरेको छ । त्यो कारण पनि हामी अगाडि वढेका छौ । चैतसम्म जिल्लामा दरबन्दी मिलानको काम सकिने छ । दरवन्दी मिलान जिल्ला शिक्षा अधिकारीले एक्लै गर्ने कुरा होईन । यो सवै सरोकारवालाहरुको सहयोगमा मिलान गर्ने हो । यसकालागि पहल भने मैलै गरी रहेको छु । हाल सम्म सवैको सकारात्मक सहयोग पाएको छु । मलाई आशा छ यस कार्यमा सवैको सकारात्कम सहयोग हुने छ । तरवन्दी मिलानकालागि स्रोत व्यत्तिहरु, विद्यालय निरीक्षकहरु संग छलफल समेत भएको छ । उहाहरुले विद्यार्थीहरुको सङख्या निधारण गरी सकेपछि त्यसै अनुसार आधार निधारण गरीने छ । शिक्षकका पेशागत संघ संगठनका नेतृत्व र विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यत्तिहरुले वनाएको माप दण्डलाई जिल्ला शिक्षा समितीको वैठकमा राखेर वैठकले पास गरेपछि त्यसै अनुसार काम अघि बढछ ।
दरवन्दी मिलानका कस्तो प्रक्रिया अपनाउदै हुनु हुन्छ ?
दरवन्दी मिलानकालागि २ प्रक्रियाको सोचमा छौ । एउटा स्रोत केन्द्र स्तरवाट र अर्काे जिल्ला स्तरवाट अगाडि वढाउने सोच गरेका छौ । हामीलाई सहज स्रोत केन्द्र स्तरवाट हुन्छ । त्यसैले यसैलाई अगाडि वढाउन खोजेका छौ । यो जिल्ला शिक्षा समितीको वैठकले पास गरेको आधारमा नै काम हुनेछ । स्रोत केन्द्र स्तरमा गर्दा त्यस स्रोत केन्द्रमा रहेका विद्यालयमा प्रअ, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यत्तिहरु छलफल गरेर अगाडि वढने काम हुन्छ । यो सहज समेत हुने छ । जति स्रोत केन्द्रभित्र मिल्दछ त्यति नै स्रोत केन्द्र स्तरवाट मिलानमा जाने छौ । स्रोत केन्द्रवाट मिल्न नसकेकालाई मात्र जिल्ला तहवाट मिलाउने काम हुन्छ । स्रोत केन्द्रवाट नै शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्ने काम अघि बढ्यो भने माघ १५ गते सम्म जिल्लाका सवै स्थानमा दरवन्दी मिलान भई सक्ने छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने जिल्ला स्तरवाट गर्दा समय धेरै लाग्ने छ । जिल्ला तहवाट गर्दा हामीलाई चैत महिना सम्म लाग्ने अनुमान गरेका छौ ।
दरवन्दी मिलानका कुरा समय समयमा उठने गरेका थिए तर कार्यान्वयन हुन सक्दैनन किन ?
अहिले दरवन्दी मिलान नगरी हुदैन । दरवन्दी मिलान गर्न नसने हो भने जिल्लाको इज्जतको कुरो छ । पहिले पि सी एफको रकम आउने गरेको थियो । त्यसले विद्यालययमा शिक्षकहरु राखेर चलाउने गर्नु भएको थियो । तर अव पि सी एफको रकम नआउने भए पछि विद्यालयले शिक्षकहरु राखनु हुदैन । पिसी एफको रकम जिल्लामा दरवन्दी मिलानको लागि वाध्यता समेत परेको छ । विद्यालयमा शिक्षक नभएपछि पढाई समेत हुदैन पढाई नभएपछि समुदाय तथा अभिभाकहरुको समेत दवाव आउछ । विद्यार्थीहरुले पढन नपाए पनि आन्दोलन समेत गर्ने सक्ने छन । त्यकारण त्यस प्रकारको समस्या आउनु भन्दा पहिले नै हामी दरवन्दी मिलान गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ । यसकालागि सरोकारवाहालाहरु सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने छ । सरोकारवालावाट त्यो सहयोग प्राप्त गरेको छु । शिक्षकहरु विद्यादार्थी विहिन भएर वस्नु हुदैन । त्यसकारण अहिले दवरन्दी मिलान हुने छ । दरवन्दी मिलान नगरेर जिल्लामा अनिर्णयको वन्दी वनाउनु हुदैन । मेरौ कार्य कालमा दरवन्दी मिलान हुन्छ । यो कार्यमा सहयोग भएन भने कार्यालयले पनि यो काम पुरा गर्ने छ । त्यस्तो पस्थिीति हुने मैले देखेको छैन । जिल्लामा सवै राम्रो कामका लागि सकारात्म सहयोग गर्ने हुन्छ ।
दरवन्दी मिलानमा गर्दा जिल्लाको दरवन्दीले पुग्छ त ?
दरवन्दी मिलान गर्दा आधारभुत तहको लागि जिल्लामा पुग्ने सङख्या छ । माध्यमिक तहकालाई केही समस्या पर्ने छ । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लामा दरवन्दी मिलान गरेर नपुग दरवन्दी माग गर्ने भनेको छ । त्यसै अनुसार दरवन्दी मिलान गरेर कति दरवन्दी अपुग हुन्छ । त्यो सङख्यामा शिक्षक दरवन्दी हामीले माग गर्ने छौ ।
शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने आधार कस्ता वनाउनु भएको छ ?दरवन्दी मिलानकालागि शिक्षक व्यवस्थापनकालागि आधारत वनाउदै छौ । जस्मापहिलो आधारको रुपमा अपाङग भएकालाई उहाहरुलाइ सहज हुने विद्यालयमा प्राथमिकता दिईने छ । त्यसै गरेर महिलाहरुलाई प्राथमिक्ता दिईने छ । धेरै दरवन्दी
रहेका विद्यालयमा जुनिय शिक्षकहरुलाई अन्य विद्यालयमा दरवन्दीमा पठाउने गरी आधार वनाईने छ । शिक्षकहरुलाई सकभर एउटै स्रोत केन्द्र भित्र नै मिलान गरीने छ । शिक्षकहरुलाई एकैपटक पुर्वको पश्चिम पश्चिकालाई पुर्व पठाउने काम हुने छैन । विद्यार्थीहरु सङख्याको आधारमा आफनै स्रोत केन्द्र भित्र नै दरवन्दी मिलान हुने
छ । यदि विद्यार्थी सङख्या अनुपातमा शिक्षकको सङख्या वढी भयो भने मात्र त्यहि पनि नजिकै रहेको स्रोत केन्द्र अन्र्तगतका विद्यालयमा पठाउने काम हुने छ । यसो गर्दा शिक्षकहरुलाई पनि धेरै समस्या नपर्ने र केही समस्या भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि वढनु हुन्छ । नजिकै दरवन्दी मिलान हुने भए पछि सवैको
सहयोग समेत हुने छ ।
जिल्लाको सिकाई उपल्वधी कस्तो छ ?
जिल्लाको सिकाई उपल्वधी पनि राष्ट्रिय स्तरको नै रहेको छ । जिल्ला औषत सिकाई उपलब्धी ५०.०७ प्रतिशत छ । यसलाई वढाउनु पर्ने छ । यसकालागि विषयगत शिक्षकहरुसंग छलफल समेत थालिएको छ । सिकाई उपल्वधी वढाउनकालागि शिक्षकको विद्यालयको नियमीत उपस्र्थीत रहन्छ किनाई भन्ने जस्ता कुराले प्रभाव
पार्दछ । विद्यार्थीलाई पुरा समय नपढाउनाले समेत सिकाई उपल्धीको असर पार्दछ । त्यसैगरेर शिक्षकले आफनो पेशा प्रति कर्तव्य पुरा गरेमा सिकाई उपल्वधी वढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि शिक्षकहरु इमान्दारीता हुनु पर्दछ । शिक्षक इमान्दारीता भएर सक्रिय भएमा सिकाई उपल्वधी वढाउन सकिन्छ ।
शिक्षामा कस्ता समस्या छन ?
जिल्लामा रहेका पुराना शिक्षहरुलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा समस्या छ । लामो समय देखि शिक्षण गदै आउनु भएका शिक्षकहरुले पुरानै शैलिमा अगाडि वढन खोज्नु हुन्छ । तर आजभोली आधुनिक प्रविधि आई सकेका छन
। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षण गराउन उहाहरुलाई अभ्यस्त गराउनकालागि केही समस्या रहेको छ । त्यसै गरेर केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि कहिले काही समस्या हुने गरेको छ । राजनितीक स्वार्थका काण पनि शिक्षा क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न के गर्नु पर्छ ?
जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेहरुलाई पहिचान गरेर उहाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । उहाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेकालागि पुरुस्कार तथा सम्मान दिनु पर्दछ । राम्रो काम गर्नेहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमहरुमा परिचीत वनाए पनि शिक्षकहरुलाई प्रोत्साह मिल्दछ । शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गरेमा उहाहरुलाई अगाडि वढन थपवल पुग्ने छ । जिल्लामा भएका सवै कार्यहरुको अनुगमन गर्ने
सकिएको छैन । राम्रो काम गरेकालाई अनुगमन गर्दा थप राम्रो काम गर्न हौसल मिल्दछ । राम्रोे काम गर्ने नसकेकाहरुलाई पनि सुधार गरेर अगाडि वढन सुझाव दिनु पर्छ ।
फेरी पनि धन्यावाद मेरो विचार राख्न दिनु भएकोमा तपाई अनि तपाईको पत्रिका लाई । जिल्लामा शिक्षाको सारात्मक रुपमा अगाडि वढाउनकालागि सञ्चरमाध्यमको भूमिका छ । यसप्रकारको सहयोग निरन्तरताको कामना गर्दछु । जिल्लाको शैक्षिक विकासको लागि जिशिअले मात्र केही गर्न सक्दैन । सवैले मिलेर गरेमा मात्र यहाँको शैक्षिक विकास हुन्छ । त्यो दिशामा मैले सधै सहयोग र समन्वयको आशा राख्छु ।